Ciidamada Jabuuti oo degmada Jalalaqsi dagaal uga saaray maamulkii degmada – Hornafrik Media Network
Waxaa faah-faahinno dheeraad ah laga helayaa dagaal u dhaxeeya ciidamo ka amar qaata maamulka degmada Jalalaqsi ee gobolka Hiiraan iyo kuwa AMISOM ee Jabuuti ee oo ka dhacay degmadaas.
Dagaalka oo ahaa mid xoogan ayaa yimid, kadib markii ciidanka maamulka degmada Jalalaqsi ay ka biyo diideen amar hawada looga saarayo is gaarsiinta magaaladaas, kaas oo ay ciidamada AMISOM, gaar ahaan kuwa Jabuuti oo sida la sheegay doonayay in muddo kooban ay hawada ka saaraan isgaarsiinta magaalada Jalalaqsi ee gobolka Hiiraan, waxaana la sheegay in ciidamadu ay qorsheynayeen in deegaano hoos taga Jalalaqsi ay ka fuliyaan howlgal miino baaris ah.
Wararka ayaa sheegaya in labada dhinaca uu dhexmaray iska hor imaad sababay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac, balse aan la cadeyn karin inta uu la’egyahay, waxaana la sheegay in dagaalkaas looga awood roonaaday ciidamada degmada Jalalaqsi, iyadoo dagaal looga saaray magaalada sida ay wararku sheegayaan.
Ciidamada Jabuuti ee qeybta ka ah howlgalka midowga Afrika ee AMISOM ayaa haatan la wareegay dhamaan xarumaha maamulka ee degmada Jalalaqsi ee gobolka Hiiraan, walina ma jiro wax war ah oo kazoo baxay maamulka degmadaas.
Shalay ayey aheyd markii ciidamada Jabuuti ay is hortaag ku sameeyeen guddoomiye ku xigeenka amniga iyo siyaasadda ee maamulka degmada Beledweyne, Muxumed Cali Dhagagaab, xilli uu doonayey inuu gudaha u galo garoonka diyaaradaha Ugaas Khaliif ee magaalada Beledweyne.
Garoonka magaalada Beledweyne oo qarka u saaran in uu xirmo